Ligh Oil gubi
Culus Oil gubi
Dual Shiidaalka gubi
qaybo bamka Oil
feature Performance gubi
Al-in-mid kabuufi. Auto-socod Manual ku biiro mid ka mid stage / laba-yada xaaqi tube ka hor ka suuroggalaan. Ammaanka nidaamka kormeerayaasha olol. iridda hawada saari doonaa si toos ah markii stop gubi ugu orodka. (manual qabsato iridda hawada, waayo, mid stage) Waa sahlan tahay rakibo, komishanka iyo ...
Notice gubi marka aad gadaneyso
U fiirso marka aad gadaneyso: Shaxanka oo dhan waxaa loo sameeyey by heerka wax ku ool ah ee kuleyliyaha tijaabo ah. Xaalada dhabta ah waxaa laga yaabaa kala duwan, sababtoo ah arrimaha soo socda: a. cadaadiska ee kuleeliyaha laga yaabaa in aanay isku mid noqon. Sidaas awood u of taas oo gubi ka adkaadaa cadaadis kuleyliyaha waa differe ...
Dual Shiidaalka gubi culus Oil / Gas tignoolojiga waxqabadka
gaaska methane 1.Alternate / gubi saliid culus. 2.Air-gaas la isku qasin at qaraxa-biibiile oo hawlgal saarka horusocod Laba-yada ah. ir ama uumi in sprayer. 3.Ability si aad u hesho qiimaha sari fiicnayn by qawaaniintaasina hawada sari lating iyo qarax-biibiile. 4.Maintenance fududeeyey xaqiiqada ah in la isku qasin unit ah ...
Saraysa / Modulating waxqabadka Light Oil gubi tignoolojiga
gubi saliid 1.Light. 2.Two-yada hawlgalka saarka horusocod ah. cadaadiska 3.High atomisation farsamo shidaalka isticmaalaya biiyaha. 4.Ability si aad u hesho qiimaha sari fiicnayn by sharciyeynta hawada sari iyo qarax-biibiile. 5.Maintenance fududeeyey xaqiiqda ah in unit atomisation waxaa laga saari karaa oo la ...
wax looga qabto BAOSHAN, Shanghai, Shiinaha